Radio Don Bosco - Lasa nivarotra ny fananany rehetra izy, ka nividy ilay saha
Lasa nivarotra ny fananany rehetra izy, ka nividy ilay saha
Naseho ny : 28 jolay 2021
Alarobia 28 jolay 2021 — Herinandro fahafito ambin'ny folo mandavantaona — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin’ny lalànao — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 13, 44-46
Olom-bitsy no nitantaran’i Jesoa ny fanoharana mahakasika an’ilay rakitra sy voahangy. Ireo mpianany, izay natao hitory ny Fanjakan’ny lanitra eran’izao tontolo rahateo, izao no nampahalalainy azy ity. Toa izao àry ny hafatra tian’i Jesoa hampitaina amintsika mahakasika an’io fanoharana io : fananana sarobidy tsy manam-paharoa ny Fanjakan’ny lanitra ary mitondra hafaliana marina sy maharitra ny fananana azy io. Asaina àry isika kristianina, mba hikatsaka azy io amim-paharetana tokoa sy amin-kafanam-po, toy ny nataon’ilay mpiasa tany sy ilay mpivarotra izay voatery nivarotra izay nananany rehetra mba hahazahoany an’io harena miafina io.
Tsy ampy ny mibanjina na ny tsy miraharaha ny Fanjakan’ny lanitra, fa mila misafidy isika na tsia ; aoka hitady izay fomba hahitana azy io isika, eny fa na amin’alalan’ny hafetsefetsena ihany koa izany, raha tsy maintsy ilaina. Marina fa mitaky fandavan-tena ny hahazoana azy io, kanefa toa tombon-tsoa aza no azo rehefa tanteraka izany.